Samsung ayaa soo saartay casriyeynta beta ee taxanaha Galaxy S10 | Androidsis
Waxaa jira warbixino badan oo ka imanaya dadka isticmaala Taxanaha Samsung Galaxy S10 faahfaahinaya arrimo kala duwan oo laxiriira dib udajinta qalabka, marwalba shaashadda, dhaqaaqa feylka, Wi-Fi qufulka, iyo buuqa kajira sameecadaha dhegaha, iyo kuwa kale. Shirkadda Kuuriyada Koofureed iyadu ma dhayalsan iyaga, si loo xalliyo kuwan si loo dhammeeyo cabashooyinka, waxay bilowday a cusbooneysiin cusub, oo lagu soo bandhigayo qaab beta ah.
Waa wax xiiso leh in si loo xalliyo khaladaadka qaarkood ay shirkaddu soo saartay qalab beta ah. Maskaxda ku hay in, maadaama aysan ahayn cusbooneysiin rasmi ah, tani sidoo kale waxay yeelan kartaa dhibaatooyin kale, laakiin way ka duwan tahay kuwa jira - waxaan rajeynayaa. Si kastaba ha noqotee, maahan markii ugu horreysay ee soo-saaraha iyo kuwa kale ay doortaan firfircoonaan, mid horay u guuleystey oo qanciyey adeegsadayaashiisa.
Dhowr maalmood ka hor, Samsung waxay soo saartay cusbooneysiin beta ah oo aan ahayn tan loogu talagalay Galaxy S10. Tani waxay xallisay dhibaatooyinka ka jira moodooyinka ku xirnaa barroosinka Bluetooth, baarka xakamaynta mugga iyo barta xaaladda, laakiin dhibaatooyinka kale ee horay loo soo sheegay waxay uga tageen sidii ay ahaayeen, xoog ahaan.
Beta-ka cusub ee hada imanaya culeyskiisu wuxuu u dhexeeyaa 130MB iyo 200MB cabir ahaan oo hadda loo qaybinayo cutubyada la furay ee Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, iyada oo loo marayo lambarka nooca "G97 U1UEU2ZSKL" iyo "G97 NKSU3ZSKL", siday u kala horreeyaan. Xaqiiqdii maalmaha soo socda waxaa laga heli doonaa gobollada kale, ha ahaato qaab beta ama qaab deggan.
Si aad u rakibto (haddii aad hesho, dabcan), waa inaad ka diiwaangashan tahay barnaamijka Samsung beta. Markaad isdiiwaangeliso, tag Dejinta> Cusbooneysiinta softiweerka qalabkaaga. Waxaan kugula talineynaa in qalabka si sax ah loogu soo oogo kuna xirnaado shabakad xasiloon Wi-Fi si looga fogaado isticmaalka aan la rabin ee xirmada macluumaadka adeeg bixiyahaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Galaxy S10 miyuu cillad leeyahay? Samsung ayaa soo saartay cusbooneysiin ay ku saxayso